I-TOKYO OTA OPERA PROJECT2021 Ukurekhodwa okusasazwayo kunye nokuhanjiswa (kuhlawulisiwe) | Umbutho Wokukhuthaza Inkcubeko kwiWadi
Dibana negem yekwayara ye-opera-Opera Gala Concert: Kwakhona (kunye nemibhalo engezantsi yaseJapan)
Isigqibo sokuhanjiswa ngokurekhodwa ngoku! (Kuhlawulwe)
Kwi-<Opera Gala Concert>, eza kubanjwa nge-8 ka-Agasti (ngeLanga) kwi-Ota Ward Hall nase-Aplico Grand Hall, ukurekhodwa bukhoma kuya kusasazwa (ngentlawulo) kubathengi abangakwaziyo ukuya kwikonsathi.
Ngelixa ukuziqhelanisa ne-chorus kusengozini ngenxa ye-corona, amalungu e-chorus ebeziqhelanisa nokwenza owona msebenzi ngelixa esenza iinzame ezahlukeneyo ezinje ngezifundo ezenziwa kwi-Intanethi kunye nokuziqhelanisa nexesha elifutshane.Kulwabiwo, ungonwabela intsebenzo enamandla eyahlukileyo kule ndawo, ngokwenza iividiyo ezinje ngomkhondo wenkqubo yamalungu kunye nodliwanondlebe nabahlohli abawaxhasayo.
Cofa apha ukuze ufumane iinkcukacha kwi-Opera Gala Concert
Ukurekhoda umhla kunye nexesha
Iqela: I-TOKYO OTA OPERA Chorus
Iokhestra: Iokhestra yeOkie yePhilharmonic Orchestra
Ulwazi lwetikiti lokuhambisa
Nge-8 ka-Agasti (ngeLanga) ngo-29: 10 ukuya ku-Okthobha we-00 (ngeLanga) ngo-10: 17
* I-E Plus iya kuyekiswa ngo-9: 25 ngoMgqibelo, nge-23 kaSeptemba.
Nge-9 ka-Agasti (ngeLanga) ngo-19: 12 ukuya ku-Okthobha we-00 (ngeLanga) ngo-10: 17
* I-E-plus iyakuphela ngoSeptemba 9th (ngeLanga) ngo-26: 11.
Ukujonga itikiti le-1,500 yen
Ulwazi lunokutshintsha.Nceda ujonge eli phepha ngolwazi olamva nje.
Imizamo yeTOKYO OTA OPERA PROJECT